မန်ဘာ အသစ်လေးများကို နွေးထွေးမှုဖြင့် ကြိုဆိုကြစေလို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မန်ဘာ အသစ်လေးများကို နွေးထွေးမှုဖြင့် ကြိုဆိုကြစေလို
Posted by ဟို ဒင်း on Jun 30, 2014 in Business & Economics, Complaint / Claim, Ideas & Plans | 31 comments
Wake up what is believe
ဒီဂနေ့ မှ တက်လာခဲ့ဒါ ဆိုဒေါ့ – မန်ဘာ အသစ် ဘဲ ဆိုကြပါစို့ –
ခါတလေ အမြင်မတော်ဆင်တော်နဲ့ခလောက် – ဆိုသမို့
ဂေဇက် နှစ်ချို့ဆြာကြီးတွေရယ် – ရက်စက်ပါပေ့ – ဖတ်ကြည့်ကြပါ –
(ရွာထဲကိုဖုန်းနဲ့ဝင်ရတယ်။တမိနစ်လေးကျပ် အလကားမရဘူး။ ရွာထဲကလဲဝင်ရခက်တယ်။
လိုင်းကောင်းတုန်းဝင်ရတယ်။ ပိုစ့်တပုဒ်ကို ၅၀ ကနေ ၁၀၀ကြားကုန်တယ်။ ဘာများလဲဆိုအသည်းအသန်ဖွင့်ပွင့်လဲသွားရော ဘာမှမဟုတ်တော့ ဒေါသထွက်တာဘာဆန်းသလဲ။ နောက်ပိုစ့်တွေစုံအောင်မဖွင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါများမိုက်ရိုင်းသတဲ့။
ကြက်သီးများတောင် ထမိပါတယ် – အင်း – တခုတော့ရှိတယ် –
အုံလိုက်ကျင်းလိုက် – ပဒူအုံ အုံ သကဲ့သို့ ဆိုတော့ – ရှိစေတော့ – ရှိစေတော့ –
တားမနိုင်ဆီးမရ – တားမဲ့သူမရှိ – မြှောက်ပင့်ပေးသူရှိ –
ဂယ်ဒေါ့ – ခင်မင်ရင်းနှီးတာ – အမျိုးတော်စပ်တာ – အသာထား –
ငါဒို့လူ မှန်ဒယ် မီလုပ်ကြပါလဲ့ – ၀ စိတ်မီကောင်းဘူး –
ကိုယ့်ထက် ၀ါကြီးသူများ သက်ကြီးသူများကို ကန်တော့ပါတယ် –
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ခဏလေးပါ – ကွေးလက် မဆန့်မီ ၊ ဆန့်လက် မကွေးမီ – ဒဲ့
ဟိုးအပေါ်ကလူ သိစေချင်တယ် – ဘာ့ကြောင့် ဒါလောက် ခက်ထန်ရသဒုံးအေ့ –
မန်းဂေဇက်ဆိုတာ – အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်တဲ့သဘောဆောင်လေရော့သလား –
မကျေနပ်ရင် ကြိုက်သလို ပြောကြပါ –
ဟိုဒင်း တွေဒါ မှားသလား –
Only the people rising up, and electing politicians (hate that word) ofalike mind will change or stop this.
About ဟို ဒင်း
ဟို ဒင်း has written 1 post in this Website..
View all posts by ဟို ဒင်း →
နွေးနွေးထွေးထွေး ဟီတာဖွင့်ပြီး ကို ကြိုးပါတယ်။
အေးသွားတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ လာပြီး ဖွတော် မမူလိုက်ပါနဲ့။
အင်မတန် ခင်စရာကောင်းတဲ့ သူတွေ တွေ့လာမယ်။
အခုတော့ပြောချင်ရင် အရီး နဲ့ အရင်ပြော။
အရပ် တစ်ခုမှာ ကိုယ်လဲ ကောင်းကောင်း နေမှ သူများကလဲ ပြန်ကောင်းနိုင်မဲ့ အရေးတွေးပါ။
မင်းပြောသလို ဘဝ တိုတိုလေး။
ကွေးလက် မဆန့်မီ ၊ ဆန့်လက် မကွေးမီ ကိုယ်ကလဲ သူများတွေ ကို အရင် ကောင်းတဲ့စိတ်မွေးဖို့၊ အကျိုးပြုပေးဖို့ စဉ်းစားဘူးလားဟင်။
ဒီ ရွာထဲ ဝင်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်တယ် ဘယ်လောက်အချိန်ကြာတယ် မင်းလဲ သိမှာပါ။
မသိရင် ခဏလေး အရင်စမ်းကြည့်ပြီးမှပြောပေါ့။
အခု ဘောလုံးပွဲ အကြောင်းပြောမလား။
ပြီးရင် Costa Rica နဲ့ Greece
အဟိ – အရီးခင်က ခင်စရာ ကောင်းတယ် –
တားထက် ၀ါကြီးမယ်ဆိုတာယုံတယ် – ကန်တော့ပါတယ်
ဒါမဲ့ တား လွန် သွား သလား အရီးခင် –
ရွာထဲကို ၀င်ရတာတော့ တားအတွက် လွယ်ပါတယ် –
ဘောပွဲတော့ မလောင်းပါရစေနဲ့ – တားက မိဘဆီမှာ တောင်းရမ်းစားသောက်
နေရသေးလို့ပါ – တော်ကြာမုန့်ဖိုးလေး ပြောင်သွားမှဖြင့် – ငတ်ပေါက်တိုးနေမှာ –
ကန်တော့ တာ လက်ချည်းဘဲလား။
တစ်ခြားသူတွေ ကိုလဲ နှုတ်ဆက်ပါလေ။
ဒါမှမဟုတ် လူအိပ်ချိန်မှ ဝင်နေရင် တော့ မသိ၊
မင်းက လွယ်လို့ လေ။
မလွယ်တဲ့ အချိန်ဆို စိတ်တို ဒေါသဖြစ်သူတွေ ကို ကိုယ်ချင်းစာနိုင်သွားမှာပါ။
ရွာထဲမှာ အားလုံး က သဘောကောင်းမနောကောင်း တွေပါ။
တစ်ခါတစ်ခါ ရွာထဲ ဝင်ချင်ဇော နဲ့ ဝင်မရရင် တော့ စိတ်တိုတတ်တာ နားလည်ပေးပါတော်။ :-)))
ဟိုက ဒီက ပြော လဲ အလကါးဘဲ မဟုတ်ပါလား အရီးခင် –
အရီးခင်တို့က စစ်ကြည့်လိုက်ရင် သိနိုင်ကြမှာပါ –
ဟင့် – ကြည့်
အရီးခင်ကလဲ ဟိုလူနဲ့ အမျိုးတော်စပ်နေပြန်ပါပီ –
ဟီး – အာ့ကြောင့် အနော့်ကို ဟီတာနဲ့ခြောက်တာနေမှာ –
အဘ ကတော့ ဟိုဒင်း ကို ကြိုဆိုပါတယ်ကွယ် ။
( ငါ့ စာ လဲ ၊ ဘာ အဓိပ္ပါယ် ပေါက်သွားမလဲ မသိဘူး ။ ဟီ ဟိ )
အဝင် ခတ်ခတ် လာတာပါပဲလားးးး
အဲဒီ ပို့(စ) ကို ပြန်ကြည့်ပါဦးးလေ….
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ ကို လူမိုက် စ ခေါ်တုန်းးလို့။
ဟိုဒင်းးးခြောက် အဲလေ အဟွာခြောက်တွေ ရေမနှူးးပါနဲ့ တော့ နော့…
အညှိုးးး အတေးးကင်းးကင်းးဆို ရင် ဒီ ရွာ က အရမ်းးးပျော်စရာ ကောင်းးးပါတယ်။
စာများများရေးပီး ကောမန့်များများ ပေးနိုင်ပါဇီ သော်ဝ်
.အသစ် ကလေးတွေ (မန်ဘာ) ကိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ်…
.မျက်နှာဖုံးစွပ် ကလေးတွေကိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ်…
.ကလုန်းတွေ ပုံတူပွားတွေ ခြောက်ကိုယ်ခွဲတွေကိုလဲ ကြိုဆိုပါတယ် ….
.အသံထွက်ပြီး မကြိုဆိုရဲတဲ့ အခါများမှာလဲ
.တိတ်တိတ်ကလေး ပွစိပွစိ နဲ့ ကြို ဆို လျှက် ရှိပါကြောင်း…..
“နွေးထွေး စွာ ကြို ဆို ခြင်း ”
နေ့ တိုင်း ၀င်
ကိုယ် ရေး ချင် တာ ၀င် ရေး
သများ ဟာ ဖတ် ပြီး ကော် မင်း ပေး ချင် ပေး မ ပေး ချင် နေ
ကိုယ့် စာ ကို
ကော် မင်း မပေး ရင် လဲ စိတ်မကောက် နဲ့
ဒေါပွ နေ ရင် လဲ ကွိုင် သာကွိုင်
ဘယ်သူ့ ကို ဘယ် သူ ကမှ
လဲ နိုင် စ ရာ မ လို
ဘယ်သူက မှ ဘယ် သူ့  ကို လဲ
ကြောက်စရာ မလို တာ
မန်းဂေဇက် ဆို တာ ရဲ့
အနှစ် သာ ရ
အဲ လူ့ သဘာဝ အ ရ
ကောင်း တယ် ပြော ရင် တော့
ခဏလေး နေပြီး ထွက်ပြေး လို့ ကတော့
ကလေး တုံး က လို ဆဲလိုက် မယ်
“တေး တေး ကွာ”
အစ ကတော့ ကို ဟိုဒင်းကို ကော် မင်း ပေး တာ
ဒါ ပေမယ့် ကျုပ် ကဗျာ တစ်ပုဒ်ရ သွား လို့ တင် ပြီ ဗျို့
အဝှာ ရေပြန်မနှူးချင်လို့ ဒီိအတိုင်း ထိုင်ကြည့်မလို့ပဲ
ဘေးမှာ စည်းကမ်းချက်ပေါင်း တစ်ဆယ့်နှစ်ချက် (ထပ်တိုးဖြည့်စွက် တစ်ခုပါထည့်ရင် တစ်ဆယ့်သုံးချက်) ရှိပါတယ်။
တော်ပါတော့ မောင် မာ ဃ ရယ်
ဒါတွေ ပြန်ပြော လဲဘာ မှ မ ထူး ပါ
ဟိုဒင်းကို အဝှာလုပ်တော့ ငယ်သံပါအောင်အော်သတဲ့
မန်ဘာအသစ်တွေကိုလည်း နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
အနာဟောင်းကိုတော့လာလာမဆွနဲ့ ၇န်တိုက်မပေးနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့
comments တွေပေးရင်းပျော်ပျော်ပဲ နေကြရအောင် ခင်နဲ့ ည
ဂဇက် ရဲ့ အုပ်မြစ် မဏ္ဍိုင် ၀ါရင့် ဆ. ဆရာ ကြီး များ လာရောက်ကြိုဆိုသမှုပြုပြုသမျှ
ကျေးဇူး တင်အပ်ပါပေ၏ –
ကျနော်မျုိး၏ စာဖတ်အား အသင့်အတင့်ဖြင့် ဇီဇီ မှ လွဲ၍ ကျန်သော ဂဇက်ဆြာရီးများ
အား သိရှိပါ၏ –
သင်ကြားပေးပါ – ညွှန်ကြားပေးကြပါ –
သက်နု မန်ဘာငယ် များအပေါ် လက်တွဲ ခေါ်ပေးကြပါကုန် –
ဟိုဒင်း အတွက် မဟုတ်ပါ – ဟိုဒင်းက အမြဲမဟုတ်သော်လည်း – ယခင်လဲရှိ
ခုလည်းရှိ နောင်လဲ ရှိနေမှာ –
မိကျောင်းမင်း ကို ရေကင်းပြရန်လည်း မစွမ်းသာပါ –
ဂေဇက်သခင် သူတော်စင် အပေါင်းတို့ —
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ… အနော်ကတော့ ဒီရက်ပိုင်း သိပ်မဝင်အားတော့ ကွန်မန့်မပေးဖြစ်ရင်လည်း ခွေးလွှတ်ပေးဘာ…
ဖုန်းကော်နက်ရှင်က မကောင်းဘူးဗျ.. ဒီကြားထဲ mobile view ဆိုရင် ပို့စ် (၇) ပုဒ်လောက်ပဲ ပေါ်တာ… ဖွင့်လိုက်ရင်လည်း loading ကို စောင့်နေရတယ်… ပွင့်လာတော့ကျ သိပ်မထူးခြားတာမျိုးဆိုတော့ စိတ်တိုမိတယ်ဗျ…. အောက်က ပို့စ်တွေဖတ်ချင်ရင် more post ဆိုတာကို Loading စောင့်နေရတာ ကြာတယ်.. destop view ကျတော့ လေးတယ်… မြန်မာနိုင်ငံက သုံးရတဲ့သူတွေရဲ့ ဒေါသကို နားလည်ပေးပါဗျာ..
ဟင့်အင်း – အနော်ကတော့ အဲလို မဖြစ်စဖူးမို့ –
again and again ခွေးလွှတ်ပေးပါ (ကော်ပီ)
အဆင်ပြေသွားမှာပါ – အောလဒူ လဲ လာတော့မယ်
တယ်လီနော် ကိုလဲ မျှော်တော်ဇော နဲ့ မောနေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူား အပေါင်းတို့ –
ဒီဂဇက်ကို ဖတ်နေတာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ၊
အဲဒီမှာ ဘာအခက်အခဲဖြစ်လည်းဆိုတော့ တစ်ချို့မန်ဘာတွေဘဲ ဖတ်ခွင့်ရှိတဲ့ပိုစ့်တွေကျတော့ မန်ဘာမဟုတ်ရင် ဖတ်ချင်ပေမယ့် ဖတ်မရတာနဲ့ မန်ဘာအဖြစ်ဝင်ခဲ့တာပါဘဲ။
ကိုယ်တိုင်က စာရေးမကောင်းလို့ ပိုစ့်တော့ရေးဖြစ်ခဲတယ် ဖတ်ပဲဖတ်ခဲ့တာများပါတယ်။
ဒီ ဂဇက်ကို မိမိသဘောဆန္ဒအရ ၀င်ကြတယ် မိမိသဘောဆန္ဒအရရေးကြတယ် မိမိသဘောဆန္ဒအရ မရေးဘဲထွက်သွားကြတာဘဲလေ ကြိုဖို့လည်းမလိုသလို နင်ဖို့လည်းမလုပ်ကြပါဘူး။
ကိုယ့်သဘောကိုယ်ဆောင်ကြတာဘဲဉ္စာ အထူးတလည်လုပ်စရာလိုမယ်လို့ ကျုပ်တော့မထင်။
အင်းပြောပြန်ရင်လဲ ဟိုဒင်းကို ဟိုဟာညှပ်တာလူမမြင်ဘူး အော်တာပဲလူကြားတယ်။ အိုက်တော့ ကြိုဆိုပါတယ် ဆဲလဲကြိုပါတယ် မဆဲလဲကြိုပါတယ်။ သူများပိုက်ဆံကုန်တာ င့ပိုက်ဆံမှမဟုတ်တာ ဆိုတော့ တမနစ်လေးကျပ်လဲဘာဖြစ်သလဲကုန်ပလေ့စေပေါ့နော့ အေးဆေး အေးဆေး ကွေးသောလက်မဆန့်တာ တယောက်ထဲနဲ့ပဲဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော့။ ပြောတဲ့သူကော ပြောခံရတဲ့သူကော ဖတ်တဲ့သူတွေပါဆိုင်ပါတယ်လေ့။ အိုက်ဒါလေးပြောချင်တာပါ။ ဝင်လာတာကြိုဆိုပါတယ် အားကြီးအများကြီးချစ်ပါတယ်။ ရွာနေပြည်ထိုင်လုပ်ပေးပါ။ အမြင်မတော်တာရှိဆုံးမပါ။ လွန်တာရှိဝဠာမိပါရှင့်။ အပေါ်ကလူမဟုတ်ပါဘူး TNA ပါ နာမယ်လေးမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ လမ်းတွေ့ရင်ခေါ်ပါနော့
စားတော်ကဲ…ဖိုဝင်..ဒေါ်တီအန်အေနဲ့အစဉ်မပြေသူတွေ အစားအသောက်ဒုက္ခရောက်မယ်… မှတ်လို့…။
ဟိုဒင်းကို ဟိုဟာတော့ ညှပ်ပါနဲ့ ဆာသမားရယ် –
သို့ဂလို ဆိုပေနဲ့ – ဆာသမားကိုတော့ လေးစားသွားဒယ် –
ဆာသမား ဒေါသ ဖျေဖျောက် နိုင်စွမ်းရှိပါပေတယ် –
စလာမ် ပေးပါဒယ် ဘိုင်
၄ လ လောက် ဝေး နေ လို့ ဘာမှ ၀င် မပြော တော့ ဘူးနော်
နာမည်​က ဟိုဒင်းဆို​တော့ သ​ဘောကျသွားပြီ ဒီ​နေ့ ပရဟိတလုပ်​ငန်းအတွက်​ PLA ဆိုတဲ့ (participatory learning & action)​ သင်​တန်းမှာ လူကြီးက သူ့အ​တွေ့အကြုံကို​ပြောတာ သူ​ရောက်​ဖူးတဲ့ ရွာကလူ​တွေစကား​ပြောတာ ဟိုဒင်း ဟိုဟာ ဟိုဥစ္စာလို့ သုံးတယ်​တဲ့ တစ်​​နေ့လုပ်​ငန်းနားလို့ ရွာနားက ​စေတီ ဘုရားဖူးသွားတာ ​နေ့လည်​​နေပူ​တော့ လိုက်​ပို့တဲ့ ရွာသူ​လေး​တွေ ​ပြောတာက “ဆရာ ဟိုဒင်းလုပ်​ချင်​ရင်​ ဟိုနားမှာ ရတယ်​​နော်​တဲ့´´ ​နေပူရင်​ နားလို့ရတယ်​လို့ ​ပြောတာတဲ့
သီးခံကွီ… ဒမှာဂ လူဂျီးသားသမီးတွေချည်းပဲဆိုတော့ နဲနဲတော့ ဝါဒီများမယ် သူတို့အရွယ်တွေတောင် တော်တော်ကျီးနေပီဖစ်တဲ့ လူဂျီးသားသမီးတွေလေ
ဟိုဒင်း ဟိုဟာလုပ်လာတဲ့လမ်းဟာ ခက်ခဲမယ် ကျမ်းတန်းမယ် တခါတလေဝိတ်နဲ့ဖိခံရမယ် တခါတလေချီးသုတ်ရမ်းခံရမယ် အရမ်းယီးနွေးထွေးတွားရင် ပူတယ်လို့ခံဇားလာရလိမ့်မယ်
ဒါမယ့် သီးခံပါကွီ ဘာလို့ဆိုတော့ နောက်ဆိုရင် အိုက်နေရာတွေကိုယ်ပြန်ရောက်သွားနိုင်လို့ပါ
ဒိ ပိုစ် က ကျုပ် အတွက် တော့ ဂွတ်ရှယ် ဘဲ
ကော် မင်း ပေး မယ် ဆို ပြီး စဉ်း စား လိုက် တာ ကေ န
ိုပိုစ် တစ် ပုဒ် ဖြစ်သွား တာ အမှတ် တ ရ
အော် ပြိး တော့ BC လဲ ရ လိုက် သေး တယ် ဆို တော့
၂ သီး စား ပေါ့ နော်
ကြိုမယ် … ကြိုမယ် … လာလာ … ရွှေနွေးအိုးထဲဝင် ခွိ